Fampahafantarana avy amin’ny bilaogy nizeriana (2005) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2019 2:25 GMT
Miresaka ny andininy vao haingana faha-419 (fisolokiana) izay nivezivezy nanerana ny tontolon'ny bilaogy sy ny fampitam-baovo antserasera ny LAHATSORATRA NALAZA TAMIN'NY HERINANDRO (novambra 2005) avy amin'i Naija Jams. Toa mifantoka amin'ny hiran'ilay mpanakanto malaza, Nkem Owoh ny lahatsoratra. Sahiran-tsaina i Jams (tahaka ahy ary angamba koa ianao) mandra-pahitany ny lahatsarin'ny hira “Oyinbo man, I Go Chop Your Dollar”… Tahaka an'i Jams, tokony hijery ny lahatsary ianao ary ho fantatrao ny rehetra.!
Kazey Journal nanapa-kevitra fa ampy izay:
“Tsy te handray anjara amin'ny adihevitra forum intsony aho, azoko ampiasaina amin'ny tanjona dokambaratra ihany izany raha misy”.
“”Te-hamafa ny lisitry ny messenger-ko aho ary hitazona ireo izay mahasoa ahy sy mankasitraka ahy ihany amin'ny fomba rehetra”.
“Tsy hanaiky ireo olom-pantatra tsy misy ilana azy ao amin'ny aterineto intsony aho”.
Tsy hitsabaka intsony amin'ny olan'ny hafa aho satria miraharaha aho. Nahafantatra aho fa tsy ny “MAHAFINARITRA” no ilaina eto amin'izao tontolo izao ity. Ankoatra izay, dia nolazaina tamiko fa midika izany hoe “tsy mikarakara tsara am-pahalianana”.
Bilaogin'i Dr. Mike Blyth, mpitsabo zaza ao amin'ny Hopitaly Evangel ao Jos, Nizeria ny Kid's Doc in Jos. Nihaona tamin'ny zaza O sy ny reniny izy tamin'ity herinandro ity. “Dongadonga sy falifaly ilay zazakely” saingy mitomany mandritra ny alina. Kanefa tsy tantara mahafinaritra tahaka izany izy ity satria teraka tsy nisy sandry ilay zaza O
“Fitahiana lehibe ny nahaterahan'i O, tamin'ny fiandohan'ity taona ity, namoaka lahatsoratra tao amin'ny gazetiboky izahay mikasika ilay tovolahy iray (Kyle Maynard) izay manana fahasembanana mitovy amin'izany kanefa mpitolona mahomby, ankoatra ny zavatra hafa. Namaky izany lahatsoratra mampahery izany ilay renim-pianakaviana. Tamin'ity herinandro ity, nilaza taminy vitsivitsy momba an'i Joni Eareckson Tada aho. Hihaona indray izahay amin'ny Zoma ary hampitaha ireo fanamarihana mikasika ny zavatra hitanay tao amin'ny aterineto momba ny fikarakarana ireo ankizy ireo, ary hanome kopia azy momba an'i Joni aho. Hanonona ity bilaogy ity aho ary angamba ho vonona hizara hevitra sasany na sary izy. “
Hotontosaina amin'ny taona 2007 ny fifidianana manaraka ao Nizeria. Manakiana ny antony hanirian'ny olona hifidy mpitondra jadona miaramila misotro ronono, Jeneraly Ibrahim Babangida amin'ny taona 2007 i Chippla's Weblog, . “Saingy Nizeria indray ity….”
“But should I be any surprised? After all, we are talking about Nigeria. Reports of the Babangida campaign group hiring aircraft to spread the new gospel: “IBB – The Brave Reformer” are already filtering in. And they have chosen to do it in style, using a large banner to proclaim the coming of the kingdom, a message with resonates via an aerial campaign.”
“Tokony ho gaga ve aho? Na ahoana na ahoana, miresaka momba an'i Nizeria isika. Efa mandeha ny tatitra momba ny vondrona mpanao fampielezan-kevitr'i Babangida mitady fiaramanidina hanaparihana ireo filazantsara vaovao:” IBB – The Brave Reformer ” (IBB – ilay mpanavao sahisahy). Ary nisafidy ny hanao izany izy ireo amin'ny fomba, mampiasa sora-baventy goavana mba hanambarana ny fahatongavan'ny fanjakana, ny hafatra manako amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra an'habakabaka. “
CyBlug (GidiBlog) koa manana lahatsary “tena tsara jerena” tamin'ity herinandro ity. Fijerin'ny Nizeriana any ivelany momba an'i Nizeria izany – lahatsary fanadihadiana momba ny “fanehoana ny fomba fijery an'i Nizeria avy amin'ny vahiny sy ny ankizy Nizeriana monina any ivelany (mpanalavitra) manome fahatakarana tsara ho an'ireo olona tsy mahafantatra tanteraka an'i Nizeria, amin'ny endrika nomerika antserasera” izany. Ho an'ireo mpanandrana, vehivavy iray no nanantena an'i Lagos ho tahaka an'i Peckham! (atsimon'i Londra izay) – tahaka ahy nankany Costa del Sol ary nanantena izany ho tahaka an'i Angletera! Via Grandiose Parlour
Farany, Orikinla Osinachi ao amin'ny Nigerian Times Blog manana hevitra sasantsasany momba ny “antony tsy nahombiazan'i Amerika hisambotra an'i Osama bin Laden”. Mametraka fanontaniana manan-danja maro momba an'i Bin Laden, Amerika sy Andriamanitra ihany koa izy.
“Raha nanontany tena aho dia nieritreritra ny mety ho tsy fahafahana.
Nahoana i Amerika no tsy nahavita nisambotra an'i Osama bin Laden.
Ary ahoana raha mibebaka i Osama bin Laden?
Hamela azy ve i Amerika?
Ahoana raha manapa-kevitra ny hibebaka ny devoly?
Havelan'Andriamanitra ve izy?
Mihevitra ianao fa adala aho manana fisainana hafahafa toy izanyo.
Eny, miaraka amin’ Andriamanitra, hainy ny zava-drehetra. “